हरेक युवती तथा महिलाहरु चाहन्छन्, उनको पति वा प्रेमीले सिर्फ उनलाई नै हेरुन, परस्त्रीमा नजर नजाओस्, उनकै कुरा गरुन्, आफ्नाको मुखबाट अरुको प्रसंशा सुन्नु नपरोस् । अझ माया त माया भएजति सबै आफ्नै भागमा परोस् ।
राम्रो देखिन, प्रसंशा सुन्न पुरुषहरुलाई पनि मन नपर्ने होइन, तर महिलाहरु यो हकमा अलि अगाडि हुन्छ । चाहन्छन्, भीडमा हुँदा पनि सबैको ध्यान खिच्न सकियोस् । अझै पति वा प्रेमी आफूप्रति क्रेजी नै हुन् भन्ने उनीहरुको भित्री मनसुवा हुन्छ । तर, त्यस्तो सौभाग्य सबैलाई कहाँ मिल्छ !
तर, सामान्य केही कुरामा ध्यान दिने हो भने तपाईं आफ्नो पति वा प्रेमीको ध्यान आफूतर्फ खिच्न सक्नुहुन्छ ।
१. एक्टीभ र समझदार
पुरुषहरु एक्टीभ र समझदार महिला खुब मन पराउँछन् । घर कसरी चलाउने, पाहुनापाच्छा र परिवारसँग कस्तो व्यबहार गर्ने, कठिन स्थितिमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सबै सम्हाल्न सक्ने पत्नीको चाहना सबैमा हुन्छ । साथै अार्थिक रुपमा पनि आत्मनिर्भर हुने हो भने अझै सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
२. फ्रयाङ्क तर, थोरै डिप्लोम्याट पनि
फ्रयाङ्क मानिस कसलाई मन नपर्ला र ? लागेको कुरा भनिहाल्ने, मनमा केहि नराख्ने मानिसहरु जहिले पनि संगतका लायक हुन्छन् । तर, कतिपय महिलामा यही कुरा समस्या पनि बन्ने गरेको हुन् । कतिपय लुकाउनै पर्ने कुरा पनि महिलाहरुले फुत्काइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता पुरुषहरुमा पाइन्छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार मज्जाले खुल्नुस्, तर सबैले पढ्न सक्ने खुल्ला किताव बनिरहनु भने जरुरी छैन ।
प्रायजसो युवकहरु युवतीलाई हमेशा सुन्दर कपडा तथा मेकअपमा देख्न मन पराउँछन् । पर्फेक्ट ड‍्रेसमा हुने युवती अन्य सामान्यको तुलनामा युवकहरुको ध्यान बढी खिच्न सक्छिन् । साथै मेकअपमा पनि युवकहरुको नजर हुन्छ । साथै मेकअपले तपाईंको पर्सनालिटीमा धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । सुहाउँदो मेकअप गर्नुस्, अति भद्दा मेकअप भने प्रत्यूत्पादक हुनसक्छ ।
४. बिर्सिएको विगत हत्तपत्त नखोल्नुस्
तपाईंले आफ्नो बिर्सिएको विगतबारे बताईहाल्नु भयो भने तपाईंको सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ । प्राय पुरुषहरु महिलालाई उनको विगत हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् । यदि तपाईंलाई आफ्नो प्रेममा विश्वास छ र सम्बन्ध एकदमै मजबुद् बनिसकेको छ भनेचाहिँ बताउँदा पनि फरक पर्दैन ।